kolwelwesi Atrophic - isifo lalivamile ukuthi ngokuvamile kutholakala ukuthi uphethwe yini lapho usukhulile. Lesi sifo kuhambisana ukuvuvukala mucosa esiswini, okuholela thinning yayo akusheshi futhi yoma. Kubalulekile ukwazi ukuthi izimpawu kolwelwesi atrophic. Ukwelapha ngaphambili iqalisiwe, cishe esingaphansi ukuvela izinguquko ezingenakuhlehliswa e isakhiwo odongeni esiswini.
kolwelwesi Atrophic nezimbangela zayo
Empeleni, lokhu zokugula singenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Ngakho-ke, ngaphambi kokufunda main izimpawu of kolwelwesi atrophic, kufanele ufunde kabanzi mayelana nezimbangela zayo.
Ukuvuvukala kungenzeka ngokumelene wokugaya ukudla izifo ezihlukahlukene uhlelo. kanti ezinye zezifo ezithathelwanayo kungaholela yi efanayo. Kukhona yofuzo.
Ngokuqondene izici exogenous ukuthi leli qembu zihlanganisa Ukudla okungalungile, ukusetshenziswa isikhathi eside eyenzeke kwezidakamizwa ezithile, kanye ubuthi okungamahlalakhona, ikakhulukazi ETHYL utshwala (utshwala).
Izimpawu eyinhloko kolwelwesi atrophic
Kufanele ngokushesha kuqashelwe ukuthi yoma we ulwelwesi lwamafinyila akugcini ngokuletha umuzwa iziyaluyalu wokugaya ukudla, kodwa sithinta umsebenzi obusebenzayo esiswini acid uketshezi. Futhi ngenxa yalokho, ukuphazamisa ukusebenza cishe wonke umzimba. Lokhu kungase kuchaze lesi izimpawu eyinhloko kolwelwesi atrophic:
Ngokwesibonelo, ngemva kokudla umuntu ogulayo ngokuvamile azizwa ngukujabha nokugcwala esiswini.
Exacerbation ka kolwelwesi atrophic uvame ukuhambisana eructation ezingemnandi nge ukunambitheka kanye kunalokho eqinile isilungulela ngemva kokudla. Ngesikhathi esifanayo, ubuhlungu nokusha ukuzwa e esifundeni epigastric ngingekho Ngokungafani nezinye izinhlobo lesi sifo.
Ngenxa kokunikezwa kwe-wokugaya ukudla izinqubo Umuntu ulahlekelwa nenhliziyo emnyama, futhi wancipha isisindo.
Kukhona izinkinga sezinyawo: uhudo, ukuqunjelwa esikhundleni, noHezekeli.
Kwezinye izimo, emva kokudla, iziguli esekhala buthaka emzimbeni, isiyezi kanye ukujuluka anda.
Izimpawu eziyinhloko zihlanganisa futhi borborygmus.
Kufanele kuqashelwe ukuthi uma nokwelashwa imiphumela ingaba ebuhlungu. Phela, ngenxa ukwephula isimiso sokugaya ukudla bungene awutholi ngokwanele izakhi, amavithamini namaminerali. kolwelwesi Kaningi atrophic kuholela ukuthuthukiswa amavithamini, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, njll
kolwelwesi Atrophic futhi ukwelashwa
Uma kukhona izinkinga ezifanayo ne isimiso sokugaya ukudla bungene kufanele ngokushesha kudokotela. Sitholakele "kolwelwesi atrophic" singenziwa kuphela ngemva Endoscopy, ngalo kulula uqaphele thinning we mucosa esiswini. Ukwelashwa kuleli cala kudingeke ukuba yinkimbinkimbi. Ukuze uqale, udokotela ekunika umuthi kungasiza ukuqeda izimpawu eziyinhloko zesifo - a iphilisi i isilungulela, izidakamizwa ukufukula inqubo peristalsis. Kodwa ukubuyiselwa mucosa esiswini - inqubo eside. Ukwelashwa kulokhu kuhlanganisa ekudleni ngakwesokudla (ngaphandle ukudla ukudla abukhali, okuthosiwe, okubabayo futhi okunosawoti, uphuzo oludakayo), yokuphila asebenzayo (ukuzilibazisa ongaphandle, Physiotherapy), kanye ukwelashwa spa. In the ukungabikho ukunakekelwa ngezokwelashwa kanye ukwehluleka ukuhambisana nayo yonke izincomo udokotela kolwelwesi atrophic kungaholela kumdlavuza esiswini.
Photodermatosis noma yokungezwani komzimba ukuze ilanga: ukuphathwa, izimbangela, zokuvimbela
Ukwelashwa sinusitis ngaphandle wokubhoboza: kungenzeka
Kuthiwani uma amehlo amanzi? Ukuqedwa pathology
Isifuba esomile ezinganeni ngaphandle imfiva: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Njengoba umongo eMhlabeni kwakhiwa: isakhiwo iplanethi yethu
Ekaterina semenova (umculi): Umlando nesithombe
Avenra Beach Ihhotela 4 * Sri Lanka, Hikkaduwa izithombe kanye nokubuyekeza